Imbumbulu yeqanda Isidlidlizi, amaqanda aShukunyiswayo, iiDoll zesini sabantu abadala - iTAYSHINE
Iimveliso zethu ezigubungela izidlidliza, iWand Massager, iProstate Massager, iibhola ze-kegel, oonodoli besini, njalo njalo
Recharger Umvundla Vibrators
Amaqanda aShukuma angenazingcingo
[I-Asia yabantu abadala ye-Expo AAE 2020] Nge-25-25 ka-Agasti, 2020, iNdibano yaseHong Kong kunye neZiko leMiboniso
I-Asia Adult Expo (AAE) iphele ngempumelelo kwiNgqungquthela yaseHong Kong nakwiziko leMiboniso. Idibanisa malunga nama-200 ababonisi kunye neempawu ezivela e-China, e-Indiya, eTaiwan, eNetherlands, eNew Zealand, eRashiya nase-United States. Ukudibanisa iithoyi zabantu abadala, iilingeri ezingamanyala ...
Nge-26 ka-Epreli, i-2019 iMiboniso yaBadala yaseShanghai yasungulwa ngokusesikweni kwiNgqungquthela yokuSebenzisa iZizwe ngeZizwe yaseShanghai kunye neZiko leMiboniso!
Isikali salo nyaka sikhulu, ngaphezulu kweenkampani ezingama-300 ezithatha inxaxheba, kwaye umgangatho wesithathu weholo yomboniso uhlelwe ngokupheleleyo! Iinkampani zangaphandle zilungisiwe kwindawo yomboniso wamazwe aphesheya ukunciphisa umgama phakathi kwabaphulaphuli kunye noqeqesho lwangaphakathi ...
Nge-1 ka-Novemba, i-20 (i-Guangzhou) yeNkcubeko yezeSondo, iiMveliso zaBadala, kunye neMveliso yezeMpilo Expo yavulwa kakhulu kwiPazhou Nanfeng International Convention kunye neZiko leMiboniso. Ixesha lomboniso nguNovemba 1-3. Le seshoni ibanjwe phantsi kokuhlala okuhle ...
I-G-Spot Vibrator, Iithoyi zesini zabantu abadala, Imivundla yemivundla, Clitoral Vibrator, IiVibrators zeSilicone, Amathoyizi eSondo aBasetyhini,